ILimingbio Co Ltd. yaxoxwa ngemithombo yeendaba yaseHong Kong
ngomphathi ku 20-08-19
Iifemu zaseTshayina ziyaphithizela ukuhlangabezana neemfuno zehlabathi zeekiti zokuvavanya i-coronavirus nanjengoko imfuno yasekhaya isoma, kodwa imveliso yayo yejuggernaut ayinakwenza ngokwaneleyo ... iFinbarr Bermingham, uSidney Leng kunye no-Echo Xie Njengesoyikiso sokuqhambuka kwe-coronavirus e-China ...
ILimingBio ifumene isiqinisekiso sobhaliso se-ANVISA eBrazil kwaye yangena kuluhlu olusemthethweni lokuthengwa kweempahla e-Indonesia
ngomphathi ku 20-07-19
Abstract Kutshanje, iNanjing Liming Bio-Products Co, Ltd. (www.limingbio.com) SARS-COV-2 lgM / IgG Antibody Rapid Test Kit iye yaqinisekiswa yi-Brazilian National Supervision Bureau kwaye yafumana isiqinisekiso se-ANVISA. E ...
I-LimingBio ifumene ubhaliso lwe-ANVISA eBrazil kunye nesatifikethi sobhaliso eSingapore naseIndonesia
Ukuzabalazela ukwakha uluntu olunenjongo yomhlaba wonke!
ngomphathi ku 20-05-01
Ihlabathi elinye lilwa cooperationIntsebenziswano yamazwe ngamazwe ukwakha uluntu jikelele lwendawo efanayo ekuphenduleni ubhubhane we-COVID-19 umngeni Inoveli ye-coronavirus etshayela kwihlabathi liphela ikhokelele kwingxubakaxaka yendyikitya yokufa ye-COVID-19. Inoveli coronavirus ayinayo ...
Amava eTshayina kwiNoveli yeCoronavirus Pneumonia's Diagnosis
Yeyiphi indlela ebalaseleyo? -Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 yokuchongwa kosulelo Kumatyala e-COVID-19 aqinisekisiweyo, axele iimpawu eziqhelekileyo zeklinikhi kubandakanya umkhuhlane, ukukhohlela, i-myalgia okanye ukudinwa. Nangona kunjalo ezi mpawu azizizo iimpawu ezizodwa ze-COVID-19 kuba ezi ...
H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid,